Muuse Bixii Ma Qabsoomayo, Laakiin Cirro Anigaa Qabanaya Markuu Madaxweyne Noqdo, Hadduu Qabsoomi Waayana Waan Isku Qarxinayaa..” | Ogaalnews
Muuse Bixii Ma Qabsoomayo, Laakiin Cirro Anigaa Qabanaya Markuu Madaxweyne Noqdo, Hadduu Qabsoomi Waayana Waan Isku Qarxinayaa..”
“Kulmiye nalama tartamayo oo isagu wuxuu is leeyahay aad ku shubatid oo waxaannu leenahay Alle idiin qabay…” Siyaasiga Ismaaciil-yare
Alaybaday, 01 August, 2017(Ogaal):- Siyaasiga Ismaaciil Aadan Cismaan (Ismaaciil-yare), ayaa sheegay in Musharraxa Xisbiga uu hadda ka tirsan yahay ee Waddani Allaah uga baryayo inuu Madaxweynaha Somaliland ka dhigo, sababtana waxa uu ku sheegay in Cirro hadduu wax qaldo leeyahay Cid qabata, Isaga laftiisuna qabanayo, haddii uu qabsoomi waayana uu isku qarxin doono, halka uu ku dooday inaanu dhiggiisa Kulmiye (Muuse Biixi) qabsoomaynin, sida uu hadalka u dhigay.
Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka mid ahaa Wefti sare oo Xisbiga Waddani ka tirsan oo uu hoggaaminayo Musharraxa Madaxweynaha ahna Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Cabdiraxmaan-Cirro oo Safar ku tegay degmada Allay-baday iyo deegaanno hoos taga Isniintii shalay, halkaas oo si diirran loogu soo dhaweeyey, ayuu ka mid ahaa Ismaaciil-yare Siyaasiyiintii Khudbadaha ka jeediyey, waxaanu duray Musharraxa Madaxweynaha Xisbil-xaakimka Kulmiye ahna Guddoomiyaha Xisbigaas Muuse Biixi Cabdi.
“Qoladan la leeyahay Daahyada ayey goosteen, waa wax iska caadi ah oo waa dhaqanka Kulmiye oo Annaga ayaa tartan la soo galnay berigii UDUB oo la yaabi maayo. Laakiin, halkani waa Allay-baday oo bannaan ah, balse Mansoor Huteel oo caalami ah ayey laydhkii iyo Quraaradii nala dhaceen. Kulmiye markii aannu tartamaynay halkan (Allaybaday) baannu isugu nimi oo waatannu hadhka cad dirnay ee Alle nagu guuleeyey, wax kalena kumaannaan guulaysanne waxaannu aamminsanayn inuu ka wax bixiyaa Illaahay yahay.” sidaa ayuu yidhi Ismaaciil-yare oo markaa uu ka sheekeeyey ahaa Wasiirkii arrimaha gudaha ee Xukuumaddii Daahir Rayaale Kaahin ee UDUB.
Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka hadlaya Musharrax Cirro waxa uu ku taageeray ee uu Kulmiye uga tegay dhawr toddobaad ka hor, waxa uu yidhi; “Illaahay waxaannu Cabdiraxmaan uga baryaynaa inuu noqdo Madaxweyna dalkan u soo baxa, waxaan sidaa u leeyahay waxa jira qaar aan cid idinka qabataa aanay jirin oo Annaga wax naga qabta aannu waynay oo aan dheg la qabto lahayn, marka ay Madaxweyne noqdaan, yaa idiinka qabanaya? Cabdiraxmaan-Cirro, Anigaa qabanaya Berrito markuu Madaxweyne noqdo haddii uu qabsoomi waayana waan isku qarxinayaa. Kulmiye nalama tartamayo oo isagu wuxuu is leeyahay aad ku shubatid oo waxaannu leenahay Alle idiin qabay.”
Waxa uu Ismaaciil-yare oo hadalkiisa sii watay intaas ku ladhay; “Cabdiraxmaan waxaannu ku doorannay cid qabata ayuu leeyahay, Cabdiraxmaan waxaannu ku dooranay wuu idin dhegaysanayaa, wuu idin maqlayaa, wuu idiin samrayaa oo jawaabta ayuu ku siinayaa, Qofku haddaanu ku maqlaynin oo Aroorta haddii aad u dhiibato ku aan idiin maqlayn, oo cid qabata aan lahayn oo Siilaanyo-ba laga qaban kari waayey illaa uu Kursigii siiyay oo uu Xisbigii siiyay.”
“Qaar baa ku hadaaqa haddii uu Waddani dalka qabsado Xamar buu idin geynayaa, haddii uu Waddani qabsado Habar-awal baa la gumaysanayaa, halkee lagu arkay Reer Reer gumaysta weligeedna lama arag, awood Maxamed Siyaad Barre ayaa ku gumaysan waayay.” Sidaa ayuu yidhi Ismaaciil Aadan Cismaan (Ismaaciil-yare).